यस्तो होटल जहाँबाट दिनमा १ पटक होइन १६ पटक देखिनेछ सूर्योदय र सूर्यास्त, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
यस्तो होटल जहाँबाट दिनमा १ पटक होइन १६ पटक देखिनेछ सूर्योदय र सूर्यास्त
डिसी नेपाल , २५ चैत्र २०७४
एजेन्सी। कुनै पनि ठाउँबाट दिनमा एक पटक मात्र सूर्योदय र सूर्यास्त देख्न सकिन्छ । तर अमेरिकाको एक कम्पनीले यस्तो हटल बनाउँदैछ जहाँबाट दिनमा एक पटक मात्र नभइ दैनिक १६ पटक सूयौदय र सूर्यास्त देख्न पाइनेछ । यो सुविधासम्पन्न होटल पृथ्वीको कुनै भागमा नभइ अन्तरिक्षमा बन्दैछ ।
अमेरिकी स्टार्टअप कम्पनी ओरियन स्पेनले अन्तरिक्षमा सुविधासम्पन्न होटल बनाउने तयारी थालेको हो । क्यालिफोर्नियाको सेन जोस मा स्पेस २.० सम्मेलन कार्यक्रममा यसको घोषणा गरिएको हो । होटलको नाम ‘औरोरा स्टेशन’ हुनेछ । यसलाई अमेरिकी स्टार्टअप कम्पनी ओरियन स्पेनले तयार गर्नेछ । कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख फ्र्यांक बेंगेरले २०२२ सम्म होटलमा बस्न सम्भव हुने बताए । यहाँ १२ दिन बस्नको लागि अन्तरिक्ष पर्यटकलाई १० मिलियन डलर तिर्नुपर्नेछ । होटलबाट दैनिक १६ पटक सूर्योदय र सूर्यास्त देख्न सकिनेछ ।
अन्तरिक्ष होटलले हरेक ९० मिनेटमा पृथ्वीलाई एक पटक परिक्रमा गर्नेछ । यही परिक्रमाको आधारमा २४ घण्टामा १६ पटकसम्म सूर्योदय र सूर्यास्त देख्न सम्भव हुनेछ । यो २०२२ सम्म बनेर तयार हुने र यसमा उक पटकमा ६ जना बस्न सकिने बताइएको छ । यो योजनामा २०१५ देखि काम सुरु गरिएको छ । यसमा अन्तरिक्षसम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीहरुले ७ हजार करोड नेपाली रुपैयाँबराबर लगानी गरेका हन् । पहिलो अन्तरिक्ष होटलको लम्बाइ ४३.५ फिट र चौडाइ १४.०१ फिट हुनेछ । यो होटल पृथ्वीबाट ३२१ किलोमिटर टाढा रहेर पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्नेछ ।